Dagaal Culus Oo Ka Dhacay Gobalka Shabeelada Dhexe. – Bogga Calamada.com
Dagaal Culus Oo Ka Dhacay Gobalka Shabeelada Dhexe.
January 7, 2018 4:14 am Views: 205
Wararka laga helayo degmada Balcad ee gobalka Shabeelada dhexe waxey sheegayaan in duleedka degmadaasi uu ka dhacay dagaal culus oo muddo socday.
Dagaalkan ayaa dhexmaray ciidamada Shabaabul Mujaahidiin iyo maleeshiyaatka dowlada Ridada ,dagaalkan waxa uu sigaar ah kaga dhacay agagaarka deegaanka Ceelka-geelow ee duleedka degmada Balcad.
Dagaalka ayaa yimid kadib markii ciidamada Shabaabul Mujaahidiin weerar qorsheysan ku qaadeen kolanyo ka tirsan maleeshiyaatka Murtadiinta oo kasoo baxay degmada Balcad geedahana ka gurayay howdka ku aadan deegaanka Ceelgeelow.
Dagaalka markii muddo uu socday ayey gabi ahaan maleeshiyaatka dowlada u carareen dhanka degmada Balcad oo markii hore ay kasoo baxeen.waxeyna shacabka ku dhaqan degmada Balcad inoo xaqiijiyeen in maleeshiyaatka dowlada gudaha degmada lasoo galeen askar iyo saraakiil fara badan oo dhimasho iyo dhaawac kaga noqday dagaalka ka dhacay duleedka degmadaasi.
Dhawaan ayeey aheed markii ciidamada Shabaabul Mujaahidiin ay cagta mariyeen Isbaaro maleeshiyaatka Murtadiinta u tiilay deegaanka Ceelgeelow ee duleedka degmada Balcad waxeyna ciidamada Shabaabul Mujaahidiinta weerarkaasi kusoo furteen hub kala duwan iyagoona sidoo kale weerarkaasi ku dilay tiro ka tirsan maleeshiyaatka maamulka gaala raaca Hirshabeelle.
Halkan Ka Dhageyso Barnaamijka Caalamulyowm 06-06-1439 Hijri.
Halkan Ka Dhageyso Warka Duhurnimo 06-06-1439 Hijri